Jetpack Joyride 2 dị na mpaghara na android | Gam akporosis
Jetpack Joyride 2 rutere na mpaghara iji gaa n'ihu njem dị egwu nke nnukwu Barry Streakfries
Taa bụ ụbọchị ahụ wepụtara Jetpack Joyride 2, ihe ịga nke ọma na otu n'ime ihe egwu egwu Halfbrick Studios, ikpe mara n'etiti egwuregwu ndị ọzọ nke Fruit Ninja na-eri ahụ ma ọ bụ Dan the Man. Egwuregwu nke ndị anyị ga-anụ ụtọ ọnwa ole na ole na nke ga-abịa kpamkpam kpamkpam na ụfọdụ ihe ọhụụ ọhụụ.
N'ezie, anyị ga-eji ike ya mara ya, ebe ọ bụ oge ọ bụla ị na-egwu ị ga-anọ otu na a kacha nke 5; ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ekele maka mgbasa ozi anyị nwere ike ịtụte otu oge na onye ọzọ ga-enwetakwu ụgwọ ọrụ. Eeh, ọ bụ ihe ọ bụ, mana ọ bụ nnukwu Jetpack Joyride ọzọ!
1 Nnukwu Barry StreakFries etiwapụ ọzọ
2 Kwalite jetpack gị na ahụike na mmebi ọzọ na Jetpack Joyride 2
3 Meziwanye ihe niile na nnukwu usoro a
Nnukwu Barry StreakFries etiwapụ ọzọ
Mpaghara, Jetpack Joyride 2 dị maka anyị ịlaghachi na Barry ife efe karịrị nke eziokwu na niile ngwaọrụ na-ekwe ka ị ofufe na gị jetpack ma ọ bụ jiri ụfọdụ n'ime ha na-ukwuu uru nke ndị iro gị.
Ebumnobi, dị ka nke gara aga, bụ iru mita kachasị elu o kwere omume iji kpọghee ebe ọhụrụ. Ihe tụrụ anyị n'anya na nkeji nke abụọ a bụ na ugbu a ụfọdụ n'ime "ụgbọ ala" ahụ onye na-akwado anyị nwere ike iji ga-akpọrọ ya gafee ebe ọzọ ka ndị aststeroid ghara ime ya afọ.
Nke ahụ bụ, n'oge ụfọdụ, anyị ga-ahapụ veranda oghere ndị ahụ na-enweghị ngwụcha ka ha gaa gburugburu ebe ndị ọzọ wee si otú a nye ọtụtụ ụdị ụdị nke Jetpack Joyride a. Ma nke ahụ bụ afọ ya agafewo kemgbe a hapụrụ nke mbụ jiri ihe karịrị nde 5 nyochaa ya.
Kwalite jetpack gị na ahụike na mmebi ọzọ na Jetpack Joyride 2
Ma ọ bụbeghị izu ole na ole kemgbe ahụ gaara ewepụta Mkpụrụ Ninja 2, so Halfbrick Studios is full blast to release these games regionally ịkpụcha mmejọ. Ọ bụ ezie na site na ihe anyị nwee ike igwu egwu, eziokwu bụ na ọ karịrị izu oke ma ọ bụ naanị ihe ole na ole dịka rụzuru na ndị ọzọ ka ga-arụ ọrụ.
Anyị nwere ike ikwu na obere ihe agbanweela na isi usoro nke Jetpack Joyride 2. Anyị nwere onye na-akwado anyị na jetpack na-awụlikwa elu n'oge kwesịrị ekwesị iji were mkpụrụ ego niile enwere ike, ma jide ngwa agha dị iche iche nke ga - enyere ya aka iwepụ ndị iro na - abịa n'ihu.
N'ezie, anyị nwekwara ndị ahụ ịdọ aka na ntị maka ngwa agha nke ga-aga anyị ọsọ ọsọ, na igwe eletriki ndị ahụ nke anyị ga-ezere ma ọlị. N'ime ịkwa iko a, anyị ga-anwa ịnakọta dị ka o kwere mee, dịka ụgbọ ala ndị ahụ pụrụ iche nke ga-enye anyị ngwa agha anyị ga-amụta iji aka na ịkwaga.
Meziwanye ihe niile na nnukwu usoro a
Naanị nnukwu ọdịda dị na Jetpack Joyride 2 bụ na ọ dabere n'ike. Anyị nwere 5 nkeji iji nọrọ otu oge ọ bụla anyị bidoro egwuregwu. Dika anyi kwesiri inwe mgbasa ozi nke anyi puru ihu ma anyi megharia onye anyi huru n’anya ma obu anyi choro inweta oke ugwo na mgbasa ozi ozo. Ma ọ bụghị anyị nwere ọtụtụ mmụba maka onye protagonist anyị, karịsịa na ngwá agha na ụgbọ ala ị nwere ike inweta.
Ugbu a rụzuru adịghị; kpomkwem otu n'ime ndị isi ihe na-enwe ike inwe ọganihu ngwa ngwa ma si otú kpọghee ọhụrụ Loot igbe na-ekwe ka anyị na-enwe ndị ọzọ nke ọhụrụ a Halfbrick egwuregwu.
Banyere ndịna, Ha na-alaghachi na vitamin na mmụba ndị a tụrụ anya ya na yana mmegharị na 18: 9 screen karịa zuru oke. Soundsda ọhụrụ, gburugburu, ụgbọ ala ndị ahụ dị mma karịa mgbe ọ bụla na ọkwa ọhụrụ nke iji chọpụta oghere mgbe anyị nwere ụgbọ mmiri mba ọzọ. Ihe niile na - agụ egwu kachasị mma maka freemium nke ga - aga nke ọma.
Jetpack Joyride 2 dị na mpaghara na maka ndi mmadu ndi ozo anyi enweghi ihe ozo karia ichere maka ihe di (ma ee, ndi nwudoro bu nke anyi).
N'agbanyeghị nke mpaghara, site na ihe anyị nwalere n'oge, ọ na-ezu oke oke na ihe niile mere nke mbụ ama, yabụ ọ na-abịarute kpamkpam site na eserese, ọtụtụ gburugburu, ụdịdị ndị ọzọ na freemium.
Usoro edemede: 8,2
Otu n'ime ihe dị mma maka nloghachi ekwentị
Karịa ihe niile anyị masịrị na mbụ
Ngwá agha ndị ọzọ na ụgbọ mmiri nke ị ga-abanye na mbara igwe iji chọpụta
Na nsogbu zuru oke ka ị ghara ịkwụsị igwu egwu
Ike dị ala igwu egwu karịa egwuregwu 5
Gbalịa ịhụ mgbasa ozi iji nwee ọganiihu ntakịrị
Jetpack Joyride 2: Mgbo Rush
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Jetpack Joyride 2 rutere na mpaghara iji gaa n'ihu njem dị egwu nke nnukwu Barry Streakfries
Kedu ihe bụ Kuki Nchekwa Kuki, nnukwu ihe ọhụụ nke Firefox maka gam akporo
Carbon 1 MK II: Ekwentị mbụ wuru na eriri carbon enweela ụbọchị na ọnụahịa na Spain